ဂျူနီယာဝင်း - သင့်အနာဂတ်ကို ပြောပြမယ့် ပြင်သစ်ကဒ်များ -၁ - MoeMaKa Media
Home / Junior Win / Literature / Tarot / Thoughts / Translation / ဂျူနီယာဝင်း - သင့်အနာဂတ်ကို ပြောပြမယ့် ပြင်သစ်ကဒ်များ -၁
Junior Win, Literature, Tarot, Thoughts, Translation
(မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၂၀
(ပြင်သစ်တားရော့နဲ့ ကိုဗစ်ကို ဖတ်ကြည့်ခြင်း)
(Lisez votre Avenir dans Le Tarot de Yumi, 2003 ဇန်နဝါရီလ ထုတ် ပြင်သစ်မဂ္ဂဇင်း ELLE မှ Didier Blau ရေးသားသော “ယူမီ၏ “တားရော့က ပြောပြတဲ့ သင့်ကံကြမ္မာ“ ဆိုတဲ့ပြင်သစ်ဘာသာ ဆောင်းပါးကိုသင့်လျော် သလိုဘာသာပြန် တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ အဲသည်တုန်းက မဂ္ဂဇင်းကလည်း ကိုယ်ပိ်ုင်မဟုတ်တော့ ငှားပီး စကင်ဖတ်ပီး သိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့ ပုံတွေ သိပ်မကောင်းရင် သည်းခံပေါ့နော့်။ )
ပြင်သစ်ဗေဒင် တားရော့ကဒ် က ပြောပြတဲ့ သင့်ကံကြမ္မာ ဆိုပီး ဘာသာပြန်ချင်ခဲ့တာ ကြာပါပီ။ ၂၀ဝ၃ ခုနှစ် ကတည်းက ဆိုပါတော့။ ဒါပေမယ့် ဒါကို ဘာသာပြန်ဖို့ ပျင်းလည်းပျင်းမိတယ်။ ပြင်သစ်လိုဆိုတော့ စာမဖတ်ချင်တာလည်း ပါတာပေါ့။ ဒါ့အပြင် အကြောင်းအရာကလည်း ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ သို့သော် လူတော်တော်များများက ကိုယ်လည်းအပါအဝင်ပေါ့လေ ဗေဒင် တို့ဘာတို့ကို စူးစမ်းချင်ကြပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သိချင်တယ်ပေါ့။ သည်တော့ မေးလညး်မေးလိုက်ရော၊ စိတ်မချမ်းသာရရင် ဒါတွေ မဟုတ်ပါဘူးကွာ လို့ ဆိုပီး မယုံပဲ နေပလိုက်ကြတယ်။ ဟော ကောင်းတာလေးတွေ တွေ့ရင် ပျော်ပီး ဒါ ဟုတ်တယ်ကွ မှန်တယ်ကွဆိုပီး ယုံပလိုက်ကြတာပဲ။ ဗေဒင် က သည်လိုလုပ်ပါ ဆိုတိုင်းလည်း လိုက်လုပ်ချင်မှ လုပ်တာပါ။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ ကိုယ်လုပ်တာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ဖတ်ပါပေါ့နော်
ဒါပေမယ့် ဟောသည် ပြင်သစ်ဗေဒင်ကတော့ လက်တွေ့ကျတယ်လို့ ရေးတဲ့သူက ကြေငြာထားတာပါ။ အခုတွေ့ရတဲ့ စာမျက်နှာ ကိုကြည့်လိုက်ပါ။ ပြင်သစ်စာလုံးများပေးထားတဲ့ ပုံလေးတွေပါတဲ့ ကဒ် ၂၂ ကဒ်ကို တွေ့ပါမယ်။ အဲသည်ကဒ်လေးတွေကနေ သင့်ကံကြမ္မာကို သိအောင်လုပ်ကြရအောင်တဲ့။
('ဟောသည်ကဒ်လေးတွေက သင့်အကြောင်းတွေ ပြောပြပါတော့မယ်။ 'မူရင်းရေးသားသူ Didier Blau.)
စိတ်ကို သန့်ရှင်းအောင် အရင်ဆုံးတည်ဆောက်ပါတဲ့။ သင်သိလိုတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကို စိတ်ထဲမှာ မေးပါတဲ့။ ပြီးရင် ချွန်ထက်တဲ့ အရာ တစ်ခု ခဲတံ ဘောပင် လက်ညိုး တို့နဲ ပေးထားတဲ့ ပုံစာမျက်နှာပေါ်ကို မျက်စိမှိတ်ပြီး ထောက်ပါတဲ့။ ၃ခါ ထောက်ရမယ်တဲ့။ ပထမအကြိမ်ထောက် ဘယ်ကဒ်ပေါ်ကျလဲဆိုတာ မှတ် အဲဒါကို ပထမကဒ်လို့ ခေါ်တဲ့။ ဒုတိယအကြိမ်ထောက် ဘယ်ကဒ်ပေါ်ကျလည်း မှတ် အဲဒါက ဒုတိယကဒ်တဲ့။ တတိယအကြိမ်ထောက်ပါ ဘယ်ကဒ်ပေါ်သေချာကျလဲ မှတ် အဲဒါ တတိယကဒ်ပါတဲ့။ ပြီးတော့ မယုံဘူးဆိုပီး ခနခန မထောက်ပါနဲ့တဲ့။ ကိုယ့်ရဲ့ ကျတဲ့ ကဒ်သုံးကဒ်ကို စာရွက်ပေါ်မှာ ရေးမှတ်ပီး အောက်က ဟောထားတာကို ဖတ်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပုံတွေကိုသေချာ လေ့လာကြည့်ပါ။ ရောမ အက္ခရာများနဲ့ ၁ ၂ ၃ ၄ ဆိုတာတွေကို I II III IV …. နဲ့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ စာဖတ်သူများအနေနဲ့ ထိုနပါတ်များ နဘေးက ကဒ်အမည်တွေ ပြင်သစ်ဘာသာနဲ့ ရေးထားတဲ့ အမည်တွေကို ချမရေးပဲနဲ့ I II III IV … ဆိုတာတွေကို သာ မှန်မှန်ကန်ကန် ရေးမှတ်ပါ။ ဘာသာပြန်သူကလည်း ရောမ အက္ခရာများအတိုင်း ရေးပေးထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဒ်အမည်များကို တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ပေးထားတာကြောင့် ကိုယ်ကျတဲ့ ကဒ်ဟာ ဘာကဒ်လည်းဆိုတာ အရင်ဆုံး သိရမှာပါ။ စာတွေ သေချာ မမြင်ရရင် ပုံလေးတွေကို ပါ တပါတည်း တွဲမှတ်ထားပါ။ ဘာသာပြန်သူကတော့ နံပါတ်တွေနဲ့ပဲ ရှင်းပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ - သင်ဟာ ပထမအကြိမ် ထောက်တော့ V ကဒ် ရတယ် အဲဒါကိုရေးမှတ်ထားပါ။ ဒုတိယ အကြိမ်ထောက်ပါ။ II ကဒ် ပေါ်ကျရင် မှတ်ထားပါ။ တတိယ အကြိမ်ထပ်ထောက်ပါ။ X ကဒ်ပုံ ပေါ်ကျတယ်ဆို၇င် မှတ်ပါ။ ထိုအခါ သင့်စာရွက်ပေါ်မှာ V , II, X စသဖြင့် ရေးထားပီး ဖြစ်ပါမယ်။ အဲလို မှတ်ထားပီး၇င် အောက်က ဟောထားတာကို လိုက်ဖတ်လို့ရပါပီ။
ဖတ်ပုံကတော့ သင်ပထမဦးဆုံးရတဲ့ ကဒ်က V ဖြစ်တာကြောင့် V ကို ရှာပါ။ V La Porte Sacree ကိုတွေ့ပါမယ်။ အဲဒိကို ရောက်ရင် သင်နဲ့ဆိုင်တာဟာ သူ့အောက်က ရေးထားတဲ့ ပထမကဒ် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အောက်က ဒုတိယ တတိယ တွေ သင်နဲ့မဆိုင်ပါ။ နောက်တခါ သင်ရရှိထားတဲ့ ဒုတိယ က II ဆိုတာကြောင့် II ကို ရှာပါ။ II Le Pourvoir ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဒ်အောက်က ဒုတိယကဒ် အကြောင်းကို ဖတ်ပါ။ သူ့အောက် က ပထမနဲ့ တတိယကဒ်များ ရေးထားတာ သင်နဲ့မဆိုင်ပါ။ ပြိးရင် နောက်သင့်ရဲ့ တတိယက X ဖြစ်တာကြောင့် X ကို ရှာပါ။ X La Loi ကိုတွေ့ပါပီ။ ထိုကဒ်အောက်တွင် ရေးထားသော တတိယကဒ်ကို ဖတ်ပါ။ သူ့ဆီက ပထမနဲ့ ဒုတိယ ကဒ်တွေကို မဖတ်ပါနဲ့ ။ သင်နဲ့ဆိုင်တာ တတိယကဒ်တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ သင်ထောက်ပီး ရထားတဲ့ကဒ်သုံးကဒ်အကြောင်းကို ပြန်ပြောရရင် V မှ ပထမကဒ်။ II မှ ဒုတိယကဒ်။ X မှ တတိယကဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်ရှင်းပြမယ်။
အောက်က ကဒ် ၃ ကဒ်သည် သင် ပထမအကြိမ် ဒုတိယအကြိမ် တတိယအကြိမ် ထောက်သည့်အခါ ရရှိလာသည့် ကဒ်ပုံစံများဖြစ်ပါတယ်။
ပထမအကြိမ် သင်ရရှိသော ကဒ် V - La Porte Sacre
ဒုတိယအကြိမ် ထောက်၍ ရလာသောကဒ် II - Le Pouvoir
တတိယအကြိမ် ထောက်မိသောကဒ် X - La Loi
ထိုအခါ ပထမအကြိမ်ထာက်၍ ရလာသောကဒ်ကို ပထမကဒ် ဟုခေါ်ပါ။ ဒုတိယအကြိမ် ထောက်မိ၍ ကျရောက်သော ကဒ်ကို ဒုတိယကဒ် ဟုခေါ်ပါ။ တတိယအကြိ်မ် ထောက်မိသော ကဒ်ကို တတိယကဒ်ဟု ခေါ်ပါ။ ထိုအခါ သင့်မှာ ကဒ် သုံးကဒ် ရပါပီ။
ထိုကဒ်များ အကြောင်းသိရအောင် အခု ရောမဂဏာန်းများကို အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းပြပါမည်။ ဗမာ ဂဏန်းများ ၁ ၂ ၃ ၄….. အစရှိသည်တို့ကို အောက်ပါအတိုင်း ရောမ ဂဏန်းများဖြင့် တွဲရေးပြပါမည်။ လေ့လာကြည့်ပါ။
၁ I ,၂ II, ၃ III, ၄ IV, ၅ V, ၆ VI, ၇ VII, ၈ VIII, ၉ IX, ၁၀ X, ၁၁ XI, ၁၂ XII, ၁၃ XIII, ၁၄ XIV, ၁၅ XV, ၁၆ XVI, ၁၇ XVII, ၁၈ XVIII, ၁၉ XIX, ၂၀ XX, ၂၁ XXI, ၂၂ XXII,
ထိုကြောင့် ခုနက နမူနာထောက်ပီး ရလာသော ကဒ် သုံးကဒ်ကို အခုလိုတွဲမြင်ရမည်။
ပထမအကြိမ်ထောက်မိသောကဒ် V သည် ၅ ဖြစ်သည်။ ၅ခုမြောက်ကဒ်။
ဒုတိယအကြိမ် ထောက်မိသောကဒ် II သည် ၂ ဖြစ်သည်။ ၂ ခုမြောက်ကဒ်။
တတိယအကြိမ် ထောက်မိသောကဒ် X သည် ၁၀ ဖြစ်သည်။ ၁၀ ခုမြောက်ကဒ်။
အကယ်ရွေ့များ သင်ဟာ ၃ကြိမ်စလုံး ကဒ်တကဒ်ထဲကိုကြီးပဲ ထောက်မိနေတယ် ဆိုရင် သင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အဖြေဟာ ဒီကဒ်တကဒ်ထဲ က ပထမ ဒုတိယ တတိယ ကဒ်များဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
ထပ်တော့မရှင်းတော့ဘူးနော်။ ဒါလောက်ဆို ရလောက်ပါပီ။ သိပ်ရှင်းရင် ပိုရှူပ်သွားတတ်တယ်။ အခုတောင် ရှင်းရဲ့လားမသိဘူး။ ပြီးလျှင် ထို သတ်မှတ်ထားသောကဒ်တွေက ဘာပြောတာလဲဆိုတာ အခုလို ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပထမကဒ် ။ သင့်ရဲ့ယခု လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေ၊ သင့်သဘောထား ၊ သင့် လက်ရှိ အမြင် တွေကို ပြောပါတယ်။
ဒုတိယကဒ် - သင့်ရဲ့ ရှေ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အနာဂတ်ကို ခန့်မှန်းပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကဒ်က သင့်ကိုအကြံညဏ်ပေးတယ် ဒါ့အပြင် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်က သင့်ကိုမြင်နေတဲ့ အမြင်ကိုလည်း ပြောပြမယ် သင့်ကို ဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ ပြောတယ် သင်တွေ့ကြုံလာရမယ့် အခက်အခဲတွေကို ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ဖို့ ပြောပါတယ်။
တတိယကဒ် - သင်မေးထားတဲ့ မေးခွန်းရဲ့ အဖြေကို ပေးတယ်။ ပေးတဲ့အခါ သင်သိချင်တဲ့ ရလဒ်ကို မျော်လင့်ချက်ထားသင့်မသင့် ကို သူက ပြောတယ်။
အခု သင် စပီး စည်းကမ်းတွေအတိုင်းထောက်ပီးပီပေါ့။ ဖတ်လည်းဖတ်ပီးပီ ဆိုပါတော့။ ခက်တာက ဒီနေရာမှာ ရှင်းပြမည့်သူ မရှိပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အဓိပယ် ဖော်ရပါတယ်။
ဥပမာ - သင်က စာမေးပွဲအောင်မှာလား မေးတာကို တည့်တည့်လည်းမဖြေထားဘူး ရေးထားတဲ့ထဲလည်း မပါဘူး ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် လုပ်တယ် ဖြစ်မှာပဲ။ ဘာသာပြန်သူလည်း အဲလိုခံစားရဘူးလို့ပါ။ စဉ်းစားကြည့်ရင် မေးခွန်းတွေဆိုတာ ဖြစ်ချင်ရာ မေးကြမှာပဲ။ ဒါတွေအကုန်လုံး အုပ်မိအောင် အဖြေ ဖြစ်ဖို့က ခက်တယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်ကျတဲ့ကဒ်ကို ဖတ်ပီးရင် အင်း အောင်မယ်ထင်တာပဲ လို့ ရေးတေးတေး မြင်ရင် အောင်တယ်လို့ ပြောပုံပဲလို့မှတ်ပေါ့။
ဘာသာပြန်သူဟာ အခုလတ်တလော ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ကိုဗစ်ဒုတိယစစ်ပွဲ ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ မေးကြည့်ပါတယ်
ကြောက်လဲကြောက်ပါတယ်။ ကြောက်ကြောက်နဲ့ စိတ်ထဲ စဉ်းစားပီး ပထမအကြိမ်ထောက်မိတယ် XIII L’Elephant Noir. စိတ်ဓါတ်အရမ်းကျသွားပါတယ်။ ဒီကဒ်ဟာ ကဒ် ၂၂ ကဒ်ထဲမှာ အဆိုးဆုံး ကဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် မထောက်ရဲတော့ပါဘူး။ စိတ်ကို ပြန်တင်းပီး ဆက်ထောက်ပါတယ်။ XVIII - La Perfection တဲ့။ ဒါ သိပ်ကောင်းတဲ့ ကဒ်ပါ။ အားတက်မိတယ်ပေါ့။ တတိယအကြိမ် XII - L’Elephant Blanc သူလည်း ကောင်းတဲ့ထဲပါပါတယ်။ အခု အဲသည်ကဒ်တွေကို ဘာသာပြန်သူက သူရေးပြထားတဲ့ စာသားတွေ နဲ့ ဘယ်လို အဓိပယ်ဖော်ထားတယ် ဆိုတာ ဆက်ပြောပါ့မယ်။ စာဖတ်သူများလည်း နမူနာဖတ်ကြည့်ပီး ကိုယ့်မေးခွန်းနဲ့အဖြေကို ဘယ်လို လိုက်ဖက်ညီအောက် အဓိပယ် ပြန်တယ်ဆိုတာလေး လေ့လာကြည့်ပါ။ အခုလို စိတ်မချမ်းမသာ စိတ်ဆင်းရဲနေကြရတဲ့ အချိန်ကာလမှာ စိတ်ကို ကြည်လင်လန်းဆန်းဖို့ အထူးလိုအပ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း တဖက်တလမ်းကနေ စာဖတ်သူတွေအတွက် ကြိုးစား တင်ဆက်လ်ုက်ရပါတယ်။
“ ပထမထောက်မိတဲ့ကဒ်ဟာ XIII L’Elephant Noir. ဖြစ်နေတဲ့အတွက် သူ့ ကဒ်ကို ရှာပါ။ ဆယ်သုံး ခုမြောက်ကဒ်ကိုသွားပါ။ သူ့အောက်က ရေး ထားတဲ့ ပထမကဒ် ကိုဖတ်ကြည့်ပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေလည်း အတူတူ လိုက်ဖတ်ရအောင်။
ဒီတော့ အခုလက်ရှိအခြေအနေ ကိုသူကရေးထားတာပါ။ အခက်အခဲတွေ များစွာပါပဲလို့ အကြမ်းဖျင်းဆိုကြရောအာင်။ အခု လက်ရှိတော့ မလွယ်ဘူးပေါ့။ လူတွေရဲ့စိတ်တွေကလည်း ဒီထဲက ရုန်းထွက်ချင်နေကြတယ်လေ။
ဒုတိယကဒ်ကိုဖတ်ဖို့ XVIII La Perfection သွားပါ။ ဆယ့်ရှစ်ခုမြောက်ကဒ်ပါ။ သူ့ဆီရောက်ရင် အဲဒီအောက်မှာ ရေးထားတဲ့ ဒုတိယကဒ်ဆိုတာကို ဖတ်ကြည့်ကြရအောင်။ ရလဒ်ကောင်းလေးတော့ ရလောက်ပါရဲ့လေ လို့တော့ မျော်လင့်ချက်ထား နိုင်မယ် ထင်ပါရဲ့။ စာဖတ်သူတွေလည်း အဲသလောက်လေးတော့ တွေးမိမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒုတိယကဒ်က ရှေ့ကြုံလာရမှာကို ပြောထားတယ်ဆိုတော့ ကောင်းမယ့်သဘောပါပုံပါပဲ။ 'ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဘက်က တော်တော်လေးတော့ အားထုတ်ရမယ့်သဘောပါနေတယ်။ အခု အခြေအနေအရ ကိုယ်ဟာ ဒီကပ်ကြီးကို ကျော်လွှားဖို့ စည်းကမ်းလိုက်နာ ပီး နေနေရတယ်လေ။
နောက်ဆုံး ကိုယ့်မေးခွန်းရဲ့ အဖြေ ကို ရှာရအောင်။ တတိယအကြိမ်ထောက်တုန်းက ရခဲ့တာ XII L’Elephant Blanc ဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ့်နှစ်ခုမြောက်ကဒ် ဆီကို သွားပါ။ အဲဒီမှာ တတိယကဒ်ကို ဖတ်ကြည့်ရအောင်။ ဖတ်ကြည့်ရသလောက်တော့ အဆင်ပြေသွားမယ့်သဘော ထင်ပါရဲ့။ ကောင်းရမယ် လို့ယုံကြည်မူ အပြည့်နဲ့ နေသွားကြရကရအောင်လေ။“
ဒါလောက်ဆိုရင် စာဖတ်သူများလည်း သူ့သဘောတရားတွေနဲ့ ဘယ်လို ခန့်မှန်းအဓိပယ် ဖော်ရမယ် ဆိုတာလောက်တော့ သိလောက်ပါပီ။ ကဲ စမ်းကြည့်ကြတာပေါ့နော်။ အခုကစပီး ကဒ် ၂၂ ကဒ်ရဲ့ အကြောင်းတွေကို တစ်ခုချင်းဆီ ရေးသားထားတာတွေ တွေ့ကြရမှာပါ။ စိတ်ဝင်စားလည်း ဖတ်ကြည့်ပေါ။ လက်နဲ့ထောက်စမ်းသပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ သုံးခါ သေချာထောက်ပီး သေချာမှတ်သားပီး အောက်က အဓိပယ်တွေ ရှာဖတ်ကြမယ်။ အော် ထောက်တဲ့အခါ မျက်စိမှိတ်ပီးထောက်ရမယ်။ ကိုယ့်ဘေးက လူတစ်ယောက်ကို ကိုယ့်လက်ညိိုးဖြစ်ဖြစ် ခဲတံဖြစ်ဖြစ်က တကယ့်ကတ်ပေါ် သေချာကျရဲ့လားဆိုတာ ကြည့်ခိုင်းပါ။ မကျသေးဘူးဆိုရင် ထပ်ထောက်ပါ။
ဂျူနီယာဝင်း - သင့်အနာဂတ်ကို ပြောပြမယ့် ပြင်သစ်ကဒ်များ -၁ Reviewed by MoeMaKa on 4:32 AM Rating: 5
မိုးမခ၏နွေဦးတော်လှန်ရေးစာစဉ် ၃ လာမည်
ကျော်ရင်မြင့် - မြန်ပြည်တစ်ခွင်က ချစ်ကြရတဲ့သူ
မြန်မာပြည်မှာ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး ၇ လ ၁၀ ရက် မြောက်နေ့ မြင်ကွင်း
မောင်မောင်စိုး - AA အပစ်ရပ်ခြင်း - အပိုင်း (၁)
ကာတွန်း ဘီရုမာ - လာမယ် ကြာမယ်
မိုးမခအက်ဆေး - ညိုထွန်းလူ '' ရင်ထဲကလက်ခုပ်သံတွေ ''
မြန်မာပြည်မှာ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး ၇ လ ၁၁ ရက်မြောက်နေ့ မြင်ကွင်း
စိုင်းဇင်ဒီဒီဇုံ - အခန်း (၇) ဘေးရှောင်ထွက်နေတဲ့ ဝါရှင်တန်
မောင်မောင်စိုး - AA အပစ်ရပ်ခြင်း - အပိုင်း (၂)
မောင်မောင်စိုး - AA အပစ်ရပ်ခြင်း - အပိုင်း (၃)
Blog Archive September 2021 (93) August 2021 (127) July 2021 (143) June 2021 (124) May 2021 (116) April 2021 (110) March 2021 (109) February 2021 (137) January 2021 (82) December 2020 (61) November 2020 (63) October 2020 (86) September 2020 (104) August 2020 (110) July 2020 (101) June 2020 (93) May 2020 (140) April 2020 (181) March 2020 (141) February 2020 (97) January 2020 (146) December 2019 (116) November 2019 (122) October 2019 (135) September 2019 (96) August 2019 (84) July 2019 (126) June 2019 (117) May 2019 (167) April 2019 (83) March 2019 (1)